Inta badan waddooyinka Muqdisho oo saaka loo xiray bannaan bax lagu taageerayo hadalkii Madaxweynaha - Jowhar Somali news Leader
Home News Inta badan waddooyinka Muqdisho oo saaka loo xiray bannaan bax lagu taageerayo...
Inta badan waddooyinka Muqdisho oo saaka loo xiray bannaan bax lagu taageerayo hadalkii Madaxweynaha
Ciidamada Amniga ayaa saaka xiray qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Muqdisho, si loo sugo amniga bannaan bax lagu wado in lagu taageero codsigii Madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyay fadhigii Baarlamaanka ee ahaa in Gobolka Banaadir mataalad ku yeesho Aqalka Sare.
Dadka Muqdisho ayaa saaka ku soo toosay waddooyinka qaar oo Ciidamo Boolis la dhigay, waxaana la hakiyay isu socodka gaadiidka, waxaana banaan baxyada loo qorsheeyay inay ka dhacdo goobo dhowr ah.
Abaabulka bannaan baxan ayaa magaalada Muqdisho ka socday shalay gelinkii dambe illaa xalay, waxaana waday maamulka Gobolka Banaadir iyo Guddi la magac baxay Abaabulka iyo wacyigelinta Qaranka oo loo yaqaano Xooggaga Waddaniyiinta.
Banaan baxyada ayaa loo qorsheeyay inay ka dhacaan illaa afar goobood oo dadka la isugu keeni doono, kuwaasoo gaadiid looga soo qaadayo xarumaha maamulada degmooyinka Gobolka Banaadir.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shalay codsi u jeediyay Baarlamaanka Labada Aqal inay ku tixgeliyaan in Gobolka Banaadir uu ku yeesho matalaad Aqalka Sare.
Dadka odorasa siyaasadda ayaa sheegaya in banaan baxa maanta lagu wado inuu ka dhaco Muqdisho uu noqon karo inuu jid u furo in mucaaradkana ay dhankooda abaabulaan bannaan baxyo oo ay horay dowladdu u joojisay isu soo baxyada.